Gabatee qabiyeewwanii uumuuf karaa filatamaan akkaataalee keewwata mataduree durmurtaawoo, kan akka "Mataduree 1", gara keewwatawwan gabatee qabiyyeewwanii keessatti qabachuu barbaadde irratti fayyadamuu dha. Erga akkaataalee kana fayyadamtee booddee, gabatee qabiiyyeewwanii uumuu dandeessa.
Gabatee Qabeentotaa Saaguuf
Galmee kee keessaatti bakka gabatee qabiiyyeewwanii itti ida'uu barbaaddu cuqaasi.
Sanduuqa Akaakuu keessaa "Gabatee Qabiiyyeewwanii" fili.
Gabatee Qabiiyyeewwanii Haaromsuu
Gabatee qabiiyyeewwanii keessatti mirga cuqaasuun Kasaa/Gabatee Gulaali fili.
Meeshaalee - Haaromsi - Kasaawwan fi Gabateewwan mara fili.
Title is: Gabatee Qabiiyyeewwanii Uumuu